Imisipha ye-mammary enempilo njengesizathu sempilo yabesifazane
Ngempela, wonke owesifazane, ngaphandle kokunye, kufanele azi ukuthi yiziphi izinyathelo zokuvimbela okufanele zithathwe ukuze kugcinwe impilo yezinhlayiya ze-mammary. Ngakho, izigulane ezinomsoco ezinempilo njengesizathu sempilo yabesifazane - yilokhu okuzoxoxwa ngezansi.
Izitshalo eziningi zokwelapha ziyakwazi ukuvikela izilonda zomama wesifazane ezinsongweni yomdlavuza, futhi nokuvikela owesifazane ekugugeni okungakapheli isikhathi eside, egcina enhle futhi ekhangayo iminyaka eminingi futhi ekhulise impilo yakhe esebenzayo. Phakathi kwabo, indima ehamba phambili iyingxenye yezitshalo ezisiza ukuqeda umzimba wezinto ezinobungozi, ubuthi kanye nezinye izinto ezimbi - okungukuthi, izitshalo ezihlanza amathumbu, isibindi kanye negazi. Lezi zihlanganisa izimpande ze-burdock, izimpande ze-dandelion, imbewu ye-ithanga, ubisi lwe-thistle. Okubalulekile kanye nezitshalo ezinezenzo zokulwa nezidakamizwa, phakathi kwazo okuyinto enomhlonyane, i-carnation, i-ginger root, i-pepper, i-shell walnut igobolondo, i-calamus impande, i-dandelion impande, i-yarrow, i-burdock impande, i-horsetail yasendle.
Ngaphezu kwalokho, akufanele sikhohlwe izitshalo zokwelapha zokudla ezinikezela i-fibre emzimbeni: izaqathe, beet, zonke izinhlobo iklabishi, ukolweni kanye ne-oat bran. Kuzo zonke izinhlobo ze-bran, futhi manje kukhona i-rye ngisho ne-buckwheat bran, okuwusizo kakhulu emzimbeni wesifazane kuyi-bran bran. Ngokwesayensi kubonakala ukuthi banciphisa kakhulu ukuhlushwa egazini le-hormone estrogen, futhi, ngokuphulwa okuthile emzimbeni wesifazane kungabangela umdlavuza webele.
Ikhambi elihle lemvelo, ukuvuselela i-microflora yamathumbu, yizilimo eziyizigaxa ze-artichoke yaseJerusalema. Kukhona futhi izinga eliphakeme lamakhowe, afaka amakhowe amhlophe namabomvu, ama-chanterelles, kanye namakhowe aseShayina angokwelapha - i-Cordyceps, i-Reishi, i-Shiitake. Zonke lezi fungi zicebile ku-polysaccharides (i-carbohydrate eyinkimbinkimbi), ene-antitumor, i-antiviral, i-disinfecting activity.
Kunezitshalo eziningi ezinamaminerali, ama-microelements namavithamini adingekayo emzimbeni. Le-rosehip, i-sea buckthorn, i-citrus, i-hawthorn, ebomvu ne-chokeberry. Lokhu kuyingxenye yohlu lwezitshalo ezinezinhlayiya ze-antioxidant, okungukuthi, eziqukethe i-zinc, i-selenium, ithusi, ama-manganese nama-vitamin A, i-C, E. Zonke lezi zinsuku ezingenhla, zivame ukusebenza komzimba wonke wesifazane, futhi ikakhulukazi zizosiza ukugcina izilonda ezinempilo, i-thyroid, isibindi, amathumbu, kufanele asetshenziswe ngabanye ngokusakazwa kuzo zonke izilinganiso zomtholampilo zomzimba wesifazane.
Amaminerali kanye nezici zokulandelela impilo ye-mammary gland
I-microelements emzimbeni womuntu idlala indima emibili: ngakolunye uhlangothi, iqhaza ngokuhlanganyela emisebenzini yokuphila, ngakolunye uhlangothi - ivikela izifo ezihlukahlukene, nomdlavuza ikakhulukazi. Iziphi izitshalo zamaminerali nezindlela zokulandelela ezibaluleke kakhulu ekusebenzeni okujwayelekile kwezinhlayiya ze-mammary?
Kokuzikhethela, i-calcium, elawula zonke izinqubo ezibalulekile emzimbeni, kubaluleke kakhulu ekubalukeni kwayo. I-calcium yisisekelo sokwakheka kwezidumbu ezixhumene nazo zonke izitho nomzimba wonke. I-Zinc ne-selenium zibaluleke kakhulu. Ukuphulukiswa kwezakhiwo ze-selenium kuye kwafunyanwa maduzane, kodwa namuhla i-selenium ibhekwa njengabalandeli be-antitumor futhi ihlale ihlanganiswa nezinhlelo zokwelapha okulwa nomdlavuza. I-Selenium ivimbela izinqubo zokuwohloka okubi kwezicubu, futhi ngokuhambisana ne-iodine kunomthelela ekusebenzeni okujwayelekile kwegciwane le-thyroid. Ubufakazi besayensi buye bathola ukuthi, ngokuntuleka kwe-selenium, ukubonakaliswa kokuntuleka kwe-iodine kungase kubi kakhulu.
Qaphela ukugula ngesikhathi
Kuyaziwa ukuthi ukuphathwa ngempumelelo komdlavuza, esinye sezimo ezibaluleke kakhulu ukutholakala kwesifo kuqala, futhi umdlavuza webele awuyona into ehlukile kule ndaba. Ekuphileni okusebenzayo kuwo wonke owesifazane kumele ahlale ebona ukuhlolwa komzimba kanye nemithetho engaguquki yokuzihlola ngokujwayelekile izigulane ezincelisayo.
Ukuhlolwa kwesisu kwenziwa ngosuku lwesikhombisa emva kokuphela kokuya esikhathini kwabesifazane abaneminyaka yobudala. Labo besifazane abaye baye esikhathini sokuphumula, kunconywa ukuba bahlole izigulane ezincelisayo ezinsukwini zokuqala zenyanga ngayinye (ukuze kube lula ukukhumbula ngekhanda). Ukuhlolwa kwebele kufanele kube njalo njalo ngenyanga. Okokuqala, ume phambi kwesibuko uhamba nge-torso esiswini bese ubona ukuthi unezinwele ezingeni elilodwa. Bheka ukuthi kukhona yini izinguquko zangaphandle: ukubomvu, ukuvuvukala, ukugoqa kwezinsipho noma izicubu zesifuba, kungakhathaliseki ukuthi kukhona ukucubungula, uma kukhona ukuvinjelwa okuvela emanzini (futhi ubone ukuthi kuneminye imikhakha ye-excretions ebhodini). Bese uphakamisela izandla zakho phezulu, futhi, emi, bheka nje ngokucophelela, ezingeni elifanayo kukhona izimbungulu zezinyosi kanye nezinsipho. Uma owesifazane ngokwemvelo enamabele amakhulu, ukubeletha kokubeletha kwezinsipho noma ukuvuthwa kokuzalwa kwamazinyo, khona-ke owesifazane uyazi ukuthi lokhu kuyinto evamile kuye. Ukuqapha kufanele kube yizinguquko ezenzeka ngesikhathi sokuhlolwa okulandelayo.
Khona-ke, eme izandla zakho phezulu, zihlole wena ezinhlangothini. Ngemuva kwaloko, ulala embhedeni, ubeke i-roller esitini esontekile nesandla sesandla sakho sokunene ngaphansi kwamahlombe ehlombe, uyibeke phansi, ucindezela ngokushelelayo, cindezela izicubu zesifuba. Uma izigulane ezinamathele ziqukethe izimbozo, zizohlala ziphuma ngaphandle. Yenza okufanayo ngesandla sakho sobunxele. Ngemuva kwalokho, hlola izindawo ze-axillary ne-supralavicular: ngabe zikhona amafindo, ama-bulges, izimpawu. Kunconywa ukuba ucabangisise ngokucophelela i-gland ngayinye kukho konke ukuhlolwa okunjalo, ukubona ukuthi kube khona ushintsho kuyo.
Yini okufanele uyibuke
Ekuphetheni, ngifuna ukugcizelela futhi izici ezibaluleke kakhulu ekuphileni kwethu, okufanele sizinakekele owesifazane ozama ukulondoloza impilo yezinhlayiya ze-mammary. Ukuhambisana nokudla okunengqondo, ukunciphisa ukusetshenziswa kweshukela, usawoti, ukunciphisa inani lezinhlobo zezilwane ekudleni nokukhulisa ukusetshenziswa kwemifino, izithelo, amajikijolo, imikhiqizo yobisi evutshiwe. Nciphisa isisindo sakho. Khumbula isidingo sokusebenza okuvamile - lokhu kuyisisekelo sempilo yomuntu ngamunye.
Ziyini izifo eziyinhloko ezibangelwa ukubhema nokuthi ziyingozi kangakanani?
Izimbangela kanye nokwelashwa kwe-bloating
Umkhuba wokucindezelwa kubantu
Ungazifaka kanjani ezemidlalo ekhaya: lawa amathiphu angu-5 asebenza ngempela!
Yidla kwesokudla: izingxenye ezinhlanu zokudla okunempilo
Amakhambi omphakathi okwehlisa isimiso sezinzwa
Umthandazo ngokushesha ngaphambi kwePhasika - nsuku zonke, ngaphambi kokudla, ekuseni nakusihlwa - Ukufunda umthandazo kaEfrayimi umSiriya eLent
Fairy Fairy. Indlela yokugqugquzela ingane ukuba inakekele amazinyo
I-cese-cottage shizi casserole
Ukukhulelwa kweSobchak: kwenzekani esiswini se-telediv edumile? (isithombe, ividiyo)
Izitshalo ezingaphandle: Selaginella
Amapayi ama-jackets-amapaki ama-women: amamodeli amaningi kakhulu ehlobo lwe-Spring-Summer 2016, isithombe
Indlela yokufunda umfazi ukuhlonipha umyeni wakhe?
Imicabango yezingane nentuthuko yayo
Ukucindezeleka kukuvimbela ukuba ungahlali ngendlela evamile
Indlela yokususa cellulite esiswini
I-manicure ebomvu - i-classic engenamibandela